बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्नु-होस् यि सात ७ काम, सधै हुन्छ फलीफाप ! – Nepal Online Khabar
भाद्र १३, २०७८ आइतबार 454
काठमाडौं : बिहान दिनको प्रतिक हो । नयाँ दिनको सुरुवात हो । त्यसैले बिहानको समयलाई मानीसहरु प्रेम गर्छन् । दिन शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्छन् । दिन शुभ हुनका लागि तन्दुरुस्त शरीर चाहिन्छ ।
शारिरीक व्यायमले शरिर फुर्तिलो बनाउँछ । त्यसैले बिहानको समयमा अधिकाँस मानीस शारिरीक व्यायममा केन्द्रित हुन्छन् । व्यायमसँगै पुजापाठमा सक्रिय रहन्छन् । मनलाई शान्त पार्ने, देवतालाई खुशि पार्नमा प्रयत्नशील रहन्छन् ।यी दुई कामसँगै अरु के-के गर्यो भने हुन्छ फलीफाप
योग एवं ध्यान गर्नुहोस् :लामो समय सम्म स्वस्थ रहन र शरीरलाई फूर्तिलो बनाइ राख्नको लागि सर्वश्रेष्ठ उपाय भनेको योगा हो । योगाले शरीरलाई धेरै किसिमका विमारीहरुबाट बचाउँछ । मानसिक स्थितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । ध्यानले क्रो’धलाई नियन्त्रण गर्छ । मानसिक तनाब बाट मुक्ती दिलाउँछ । शरीरलाई रोग सँग लड्ने क्षमतामा वृद्धि गर्छ ।
घरको मन्दिरमा पूजा गर्नुहोस् :हरेक दिन बिहान घरमा आफूले स्थापना गरेको मन्दिरमा दियो बाल्नु अगरबत्ति जलाउनु उत्तम कार्य मानिन्छ । दियोको उज्यालो र अगरबत्तिको धुवाँले घरको वातावरणका नकारात्मक उर्जा खतम हुन्छ भने हरेक दिन विहान घरमा बत्ति बाल्नाले वास्तुका अनुसार पनि कयौं दो’षहरु हट्छन् ।
Prevमन्दिरमा पस्दा किन बजाउने घण्टी ? यस्तो छ धा’र्मिक र बैज्ञानिक कारण ! :
Nextचेल्सी र लिभरपुल बराबरमा रोकियो !